InvestFeed စျေး - အွန်လိုင်း IFT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို InvestFeed (IFT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ InvestFeed (IFT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ InvestFeed ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $50 092.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ InvestFeed တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
InvestFeed များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
InvestFeedIFT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000228InvestFeedIFT သို့ ယူရိုEUR€0.000194InvestFeedIFT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000175InvestFeedIFT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000209InvestFeedIFT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00205InvestFeedIFT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00145InvestFeedIFT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00508InvestFeedIFT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000855InvestFeedIFT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000303InvestFeedIFT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000319InvestFeedIFT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00511InvestFeedIFT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00177InvestFeedIFT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00123InvestFeedIFT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.017InvestFeedIFT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0384InvestFeedIFT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000313InvestFeedIFT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000347InvestFeedIFT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00709InvestFeedIFT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00158InvestFeedIFT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0243InvestFeedIFT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.27InvestFeedIFT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0876InvestFeedIFT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0167InvestFeedIFT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00629
InvestFeedIFT သို့ BitcoinBTC0.00000002 InvestFeedIFT သို့ EthereumETH0.0000006 InvestFeedIFT သို့ LitecoinLTC0.000004 InvestFeedIFT သို့ DigitalCashDASH0.000003 InvestFeedIFT သို့ MoneroXMR0.000003 InvestFeedIFT သို့ NxtNXT0.018 InvestFeedIFT သို့ Ethereum ClassicETC0.00003 InvestFeedIFT သို့ DogecoinDOGE0.0671 InvestFeedIFT သို့ ZCashZEC0.000003 InvestFeedIFT သို့ BitsharesBTS0.00869 InvestFeedIFT သို့ DigiByteDGB0.00747 InvestFeedIFT သို့ RippleXRP0.000805 InvestFeedIFT သို့ BitcoinDarkBTCD0.000008 InvestFeedIFT သို့ PeerCoinPPC0.000752 InvestFeedIFT သို့ CraigsCoinCRAIG0.105 InvestFeedIFT သို့ BitstakeXBS0.00985 InvestFeedIFT သို့ PayCoinXPY0.00403 InvestFeedIFT သို့ ProsperCoinPRC0.029 InvestFeedIFT သို့ YbCoinYBC0.0000001 InvestFeedIFT သို့ DarkKushDANK0.0741 InvestFeedIFT သို့ GiveCoinGIVE0.5 InvestFeedIFT သို့ KoboCoinKOBO0.0526 InvestFeedIFT သို့ DarkTokenDT0.00021 InvestFeedIFT သို့ CETUS CoinCETI0.667
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 00:00:02 +0000.